Abantu abaPhezulu abaye bafunda iJografi kunye neGeographers yoLwazi
Kukho abantu abambalwa abadumileyo abafunda i-geography baze baqhubela kwezinye izinto emva kokufumana iqondo. Kukho neendawo ezimbalwa eziphathekayo zegografi ngaphakathi kwintsimi ezenzele amagama ngaphakathi nangaphandle koqeqesho.
Ngezantsi, uzakufumana uluhlu lwabantu abadumileyo abafunda i-geografi kunye neendawo eziqhelekileyo zegografi.
Abantu abaPhezulu abaye bafunda iJografi
Umfundi ogqwesileyo owaziwayo kwi-geographer yiNkosana William (iDuke waseCambridge) waseUnited Kingdom oye wafunda iJografi kwiYunivesithi yaseSt.
Andrews eScotland; ukutshintsha ekufundeni imbali yobugcisa. Wafumana i-degree yakhe yaseScottish degree (elilingana ne-degree ye-bachelor degree) ngo-2005. INkosana uWilliam wasebenzisa izakhono zakhe zokuhamba ngeendlela zokusebenza kwiRoyal Air Force njengomqhubi we-helicopter.
Ibhola lebhola le-Basketball uMichael Jordan uphumelele kwisigidi kwijografi evela kwiYunivesithi yaseNorth Carolina eChapel Hill ngo-1986. IJordan yathatha izifundo eziliqela kwi-geographical region of the Americas.
UMama Teresa wafundisa i-geography kwizikolo zomnqophiso e-Kolkata, e-India ngaphambi kokuba asekele iiMissionaries zeCharity.
I-United Kingdom (apho i-geography iyindawo ephakamileyo ephakamileyo eyunivesithi) ithatha amabango angama-geographer awaziwayo. UJohn Patten (owazalwa ngo-1945) owayengummeli kaRhulumente kaMargaret Thatcher njengoMphathiswa wezeMfundo, wafunda i-geography eCambridge.
URob Andrew (owazalwa ngowe-1963) ungumdlali we-England Rugby Union Player kunye noMlawuli webhola loPhulo loMdlalo webhola lebhola lebhola lebhola lebhola le-Rugby.
Ukusuka eChile, owayengumongameli u- Augusto Pinochet (1915-2006) ngokuqhelekileyo ukhonjiswe njengejographer; Wabhala iincwadi ezintlanu kwi-geopolitics, geography, kunye nembali yezempi ngelixa ehambelana neSikolo soMkhosi weZikolo.
IsiHungary uPál Count Teleki de Szék [u-Paul Teleki] (1879-1941) wayengumfundisi weyunivesithi, iLungu leSikolo saseHungary, iPalamente yaseHungary, kunye noNdunankulu waseHungary 1920-21 no-1939-41.
Wabhala imbali yaseHungary kwaye wayesebenzayo kwisiHongary scouting. Idumela lakhe alinakuba likhulu kuba elawula iHungary ngethuba lokuya kwi- WWII kwaye yayinamandla xa imithetho emiselweyo yokulwa nemithetho yamaYuda. Wazibulala kwiingxabano nomkhosi.
IsiRashiya uPeter Kropotkin [uPototr Alexeyevich Kropotkin] (1842-1921), ummeli wezezizwe, unobhala weRussia Geographical Society kwiminyaka ye-1860, kwaye kamva, i-antiarchist ne-communist revolutionary.
Inobungozi yeBlij (1935-2014) yayiyi-geographer eyaziwayo eyaziwayo kwizifundo zakhe kwimihlaba, i-geopolitical kunye ne-geografi yendalo. Wayengumlobi onobungcali, unjingalwazi wezemihlaba kwaye wayeyiGeographer Editor ye-ABC yeGood Morning America ukususela ngo-1990 ukuya ku-1996. Emva kwesigxina sakhe ku-ABC, u-Blij wajoyina i-NBC News njenge-Analytical Geography. Uyaziwa kakhulu ngeencwadi zakhe zokufunda zeJografi zeGiografi: iiNkcazo, iiRegion kunye neNkcazo.
U-Alexander von Humboldt (1769-1859) wachazwa nguCharles Darwin "njengendwendwe enzululwazi oye waphila." Uhlonishwa kakhulu njengomnye wabasunguli belijografi zanamhlanje. Uhambo luka-Alexander von Humboldt, iimvavanyo kunye nolwazi olwenziwa kwintsimi yesentshona kwikhulu le-18.
UWilliam Morris Davis (1850-1934) uvame ukubizwa ngokuba ngu "uyise waseJamerican geography" ngenxa yomsebenzi wakhe ekungabinceda nje ukuseka i-geografi njengesiyalo somfundi kodwa nokuqhubela phambili kwakhe kwimihlaba yendawo kunye nophuhliso lwe-geomorphology.
Isazi- mlando seGrike uEratosthenes ngokuqhelekileyo sibizwa ngokuba "nguyise wesigodi" kuba wayengowokuqala ukusebenzisa igama elithi geography kwaye wayenombono omncinci womhlaba owabangela ukuba akwazi ukucacisa umda wehlabathi.
Izixhobo kwi-Traditional Music Group Group
I-Architecture, iJometri, kunye ne-Vitruvian Man
Umzekelo Isivakalisi seLungelo lokuSebenza
Indlela yokudlala umfundi we-Mississippi
Ubomi boMdlovakazi buhlala ixesha elingakanani?